Ihe ọhụrụ laptọọpụ Xiaomi bụ nke gọọmentị ugbu a wee mee nnukwu mmụba na mma | Akụkọ akụrụngwa
Kọmputa laptọọpụ ọhụrụ Xiaomi bụzi onye ọrụ gọọmentị ma were nnukwu ịgba ọsọ na ogo
Naanị ọnwa ole na ole gara aga, Xiaomi juru anyị anya site na mwepụta nke laptọọpụ mbụ ya abụọ, nke nyere anyị nnukwu ike, usoro nlezianya na karịa ihe dị oke ọnụ ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere nke ndị ọzọ na-asọmpi n'ahịa. Taa o meela ka stakes ahụ ọzọ ma mekwaa n'ihu abụọ nsụgharị ọhụrụ nke akwụkwọ Mi Note Book, nke a na-akpọ oge a Air 4G.
Ma ọ bụ na ngwaọrụ ọhụrụ nke ndị na-emepụta ihe na China, dị ka ekwuputala ụbọchị ole na ole gara aga, nwere atụmatụ dị mfe yana nwekwa ike ijikọ na ntanetị 4G, ihe doro anya na ọtụtụ ndị ọrụ na-enwe ekele maka ya. Ọnụahịa ya, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, bụ otu n'ime nnukwu ebe nkiri ya.
1 Xiaomi Mi Notebook Ikuku 4G 13.3-anụ ọhịa
2 Xiaomi Mi Notebook Air 4G 12.5 inch
3 Nkwenye siri ike na njikọ 4G
Xiaomi Mi Notebook Ikuku 4G 13.3-anụ ọhịa
N'okpuru ebe a, anyị na-egosi gị atụmatụ na nkọwapụta nke Xiaomi Mi Notebook Air 4G nwere ihuenyo 13.3-inch;
13,3-anụ ọhịa ihuenyo na Full HD mkpebi
8 GB nke Ram (DDR4)
Nvidia GeForce 940MX eserese kaadị (1GB GDDR5 RAM)
Sistemụ arụmọrụ Windows 10
256 (SSD) nchekwa dị n’ime
HDMI n'ọdụ ụgbọ mmiri, abụọ USB 3.0 ọdụ ụgbọ mmiri, 3,5 mm minijack na USB Type-C
Batrị 40 Wh nwere ihe ruru awa 9,5 nke nnwere onwe dị ka ndị ọrụ China n’onwe ya gosipụtara.
N'okpuru ebe a, anyị na-egosi gị atụmatụ na nkọwapụta nke Xiaomi Mi Notebook Air 4G nwere ihuenyo 12.5-inch;
12,5-anụ ọhịa ihuenyo na Full HD mkpebi
Intel Core m3 nhazi
128 (SSD) nchekwa dị n’ime
HDMI mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri, otu USB 3.0 ọdụ ụgbọ mmiri, 3,5mm mini jaak na USB Type-C
Batrị 40 Wh nwere ihe ruru awa iri na otu na otu nke nnwere onwe dịka nke ndị ọrụ China si kwado ya
Nkwenye siri ike na njikọ 4G
Versionsdị abụọ nke Xiaomi Mi Notebook emeela ka atụmatụ ha dị ọhụrụ iji hụ na anyị na-eche ihu na ngwaọrụ abụọ dị nro karịa nke gara aga malitere naanị ọnwa 5 gara aga ma nwekwaa isi ihe ọhụrụ ha incorporation nke ohere nke ijikọ site na netwọk 4G. Nke a ga - apụta na anyị ekwesịghị ịdabere na ijikọ na netwọk WiFi iji nweta ịntanetị, ihe na - adịghị adị mgbe niile.
Nsogbu nke ihe a niile bụ na ngwaọrụ agaghị enye anyị ohere ịtinye kaadị SIM nke iji nweta netwọk nke netwọkụ, mana ọ ga-ejikọ ya na China Mobile, onye na-arụ ọrụ ekwentị kacha ukwuu na mba Eshia ma na-enye 48 GB n'efu ka ịnyagharịa ndị niile na-azụ ahịa n’ime afọ mbụ. Onye ọrụ ọ bụla zụrụ ya na mpụga China ga-anọ na mbụ ma ọ bụrụ na ọ nweghị ihe gbanwere na-enweghị ike iji njikọ 4G, na ihe dịka echiche anyị dị umeala n'obi bụ ọdịda dị egwu nke Xiaomi.
Ikekwe na mba ndị ọzọ karịa China anyị nwere ike ijikọ n'ụzọ ndị ọzọ, mana ọ na-esiri ike iche echiche nke ịnweta netwọk nke netwọk site na 4G na-enweghị kaadị SIM. Anyị ga-anọgide na-akọ banyere akụkụ a ma anyị enweghị obi abụọ na Mi Notebook, ọ bụ ezie na a ga-ere ya na China, opekata mpe ugbu a, ga-anọkarị na ahịa ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ Spain.
N'oge a ụdị ọhụrụ abụọ nke laptọọpụ Xiaomi ga-adịgide naanị na China ebe a ga-eresị ha ole na ole 650 euro n'ihe gbasara 12.5-inch Mi Notebook na maka 970 ma ọ bụrụ na anyị dabere na 13.3-anụ ọhịa.
Dị ka ọ dị na mbụ, anyị nwere ike ịzụta ngwaọrụ ndị a site na ndị ọzọ ma ọ bụ site na otu n'ime ọtụtụ ụlọ ahịa ndị China nke ga-enye ha na ụbọchị ole na ole. N'ezie, ọ dị nwute na anyị ga-ahụ etu ọnụahịa ngwaọrụ ndị a azụrụ site na ndị ọzọ na-ebili.
Kedu ihe ị chere banyere laptọọpụ ọhụrụ nke Xiaomi gosipụtara taa, na nke ahụ ọzọ, ha ga-anya isi ọnụ ahịa dị egwu?. Gwa anyị ma ọ bụrụ na ị ga - adị njikere ịzụta otu laptọọpụ ọhụrụ Xiaomi, na - amata nsogbu ndị ịzụrụ ngwaọrụ na China na - etinyekarị, ebe nkwa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche na ndị anyị nwere na Spain dịka ọmụmaatụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Kọmputa laptọọpụ ọhụrụ Xiaomi bụzi onye ọrụ gọọmentị ma were nnukwu ịgba ọsọ na ogo
Ndị ọchịchị Turkey rịọrọ ka Apple nyere ha aka ka ha kpọghee iPhone 4s nke onye na-egbu onye nnọchi anya Russia na Turkey